जान्नुस् केटी जिस्काउने कुन तत्व हुन्छ केटामा ? - Khabarsansar.com
म कहिले काहिँ सोच्छु केटीले छोटो लुगा लगाएको देख्दा केटालाई जिस्काउन, दुर्व्यवहार गर्न प्रेरणा मिल्छ भने केटीलाई पनि त केटाले छोटो लुगा लगाएको देखेपछि जिस्काउन, दुर्व्यवहार गर्न मन लाग्नु पर्ने हो नी होइन? म र मेरा साथीहरू किन बाटोमा हिड्ने केटाहरूलाई जिस्काउन्नौँ? बाटोमा सवारी जाम परेको बेरा छेउको बाइकवालालाई किन म घुरेर हेर्दिन जसरी अर्को बाइक वालाले मेरो शिरदेखि पाउसम्म हेर्छ।
यदि तपाईले जस्तै कसैले तपाईको छोरीलाई जिस्काइदियो भने? यदि तपाईले अरुमाथि गरे जस्तै यौन दुर्व्यवहार तपाईको छोरीमाथि कसैले गरीदियो भने? सोच्नुहोस त! त्यौ दिन तपाईको लागि कस्तो हुनेछ!!
अहिले Anti street harassment को सप्ताह चलिरहेको छ। थुप्रै कार्यक्रमहरू भइरहेका होलान् । कति र्‍याली भइरहेका होलान्। But make sure यो कार्यक्रममै पनि कतै महिला तथा किशोरीमाथि हिंसा त भइरहेको छैन जाँनिदो वा नजाँनिदो पारामा